Cabdiraxmaan Cabdishakuur “Waxaa Macquul Ahayn In Shir Doorasho Lala Galo Ninkii Hoteelka Ku Weerraay Labo Madaxweyne Hore” – Great Banaadir
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in marnaab aysan suurtagal aheyn in Shir Doorashada Soomaaliya looga hadlayo lala galo Madaxweynaha Muddo Xileedkiisa uu Dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Hoteelka Maa’ida ku weeraray Madaxweynayaashii Hore ee Dalka.
Qoraal dheer oo uu soo dhigay Bartiisa Facebook, Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayuu ku sheegay in dalka laga badbaadiyo Kelitalisnimo iyo Natiijadeeda oo ah dirir sokeeye waa masuuliyada saaran Soomaali oo idil, waxaana uu ugu baaqay Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada inaysan marti ka noqon.
Waxaan marna maangal ahayn in shir doorasho lala galo ninkii weeray hotel ay labo Madaxweyne iyo Guddoomiye Baarlamaan hore degan yihiin, weeraray shacab iyo masuuliyiin siyaasadeed oo mudaaharaad nabad ah dhigaya ama uga haybaystaan badbaadinta dalkooda.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Waxaan marna maangal ahayn in shir doorasho lala galo ninkii weeray hotel ay labo Madaxweyne iyo Guddoomiye Baarlamaan hore degan yihiin, weeraray shacab iyo masuuliyiin siyaasadeed oo mudaaharaad nabad ah dhigaya.
In dalka laga badbaadiyo kala talisnimo iyo natiijadeeda oo ah dirir sokeeye waa masuuliyada saaran Soomaali oo idil. Haddaba siyaasiyiinta iyo madaxda Dawlad Goboleedyada iyo inta damiirka leh ee diidan dhaqanka kali talisnimada iyo in dalku dagaal sokeeye dib ugu noqdo, waxay guddanayaan waajib wadani ah iyo mid akhlaaqi ah.
Ma aha in ay cidna marti uga noqdaan ama uga haybaystaan badbaadinta dalkooda. Taariikhda ayaa xusi doonta.
Ma haboonayn in lala kulmo Guudlaawe iyo Qoorqoor iyagoo aan cadayn mowqif ay ka taagan yihiin weeraradii waxshinimo ee Farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiinta ay deeganadooda metelaan. Mana aha in ay u ekaysiiyaan in xaalku caadi yahay, lana camiro shirka Farmaajo. Waa xadgudub kale in Muqdisho oo aan dibadbax nabadeed ka dhici karin la yiraahdo ninkii shacabkeedii iyo ragii la tartami lahaa weeraray ayaa doorasho lagala xaajoonayaa.
Xigasho: Somli Weyn News